कोरोना संक्रमित गाउँपालिका अध्यक्षले भने ‘एकान्तबासलाई योजना निर्माणमा केन्द्रित गर्छु’ « Janata Samachar
कोरोना संक्रमित गाउँपालिका अध्यक्षले भने ‘एकान्तबासलाई योजना निर्माणमा केन्द्रित गर्छु’
प्रकाशित मिति : 27 May, 2020 8:07 am
गुल्मी । यहाँको एक गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमणपछि एकान्तबासमा रहेका गाउँपालिका अध्यक्षले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नाे एकान्तबासकाे समयलाई गाउँपालिकाको भावी योजना निर्माण गर्नेमा सदुपयोग गर्ने बताउनुभएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकोसमेत जानकारी दिनुभएको छ ।
आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको समयमै खुलेकोले केही दिन आफू एकान्तबासमा बस्ने र उक्त समयलाई गाउँपालिकाका आगामी योजना बनाउने अवसरको रुपमा लिने उहाँको भनाइ छ । एकान्तबासको अवधिमा आफुसँग सम्पर्कमा रहेका जो कोहीलाई पनि संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले सुरक्षित रहनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
स्वाब संकलन गरी पठाइएपछि सोमबार साँझ अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएसँगै चौतर्फी रुपमा चासो बढेपछि उहाँले विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले आफु गाउँपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन कक्षको अनुगमन तथा जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा तम्घाससम्म पुगेको र अन्य ठाउँमा नगएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गुल्मीमा पहिलोपटक मदाने गाउँपालिकामा जेठ ५ गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि धुर्कोट गाउँपालिकाका सुरक्षाकर्मी, गाउँपालिकाका सवारी चालक र स्थानीय प्रहरीको आर.डि.टि. गरिएको थियो । जसमध्ये एकजना पदाधिकारीको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष पोखरेल र ति पदाधिकारीको स्वाब संकलन गरी पठाइएकोमा स्वयम् अध्यक्षलाई नै कोरोना संक्रमण पुष्टि पनि अध्यक्षको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धुर्कोटकै अर्का संक्रमित भने हाल वडा नम्बर ४ जैसिथोकस्थित पाञ्चायन माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । उनी दीर्घरोगी पनि भएकोले उनलाई थप उपचारको लागि बुटवल लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
एउटै नगरमा १२ जनामा कोराेना, लुभु सिल
काठमाडौं । ललितपुरको एउटै नगरमा १२ जनामा कोराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महालक्ष्मी
पानीको मुहानको विषयमा दुई गाउँबीच झडप, चारजना पक्राउ
प्रकाश गौतम रुकुम (पश्चिम) । आठबिसकोट नगरपालिका–३ स्याँलाखदीमा पानीको मुहानको विषयमा दुई गाउँबीच भएको झडपमा
काठमाडौंमा थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ
एकैदिन १४७ जनाले जिते कोरोना
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा एक सय ४७ जनाले कोरोना भाइरस जितेर घर फर्किएका
एउटै नगरमा १२ जनामा कोराेना, लुभु…
काठमाडौं । ललितपुरको एउटै नगरमा १२ जनामा कोराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकामा १२ जनामा कोरोना देखिएको…
गोरखा समाजद्वारा कोरोनाबाट जीवन गुमाएका परिवारलाई…
काठमाडौं । गोरखा समाज, अमेरिकाले पालुङटार नगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जीवन गुमाएका परिवारलाई सहयोग गरेको छ । समाजले कोरोनाबाट जीवन…
सावधान ! अब कहाँ कहाँ आउँछ…
काठमाडौं । केहीदिन यताको अविरल वर्षाले मुलुकको विभिन ठाउँमा बाढीपहिरो गइरहेको छ । मनसुन शुरु भएयता २९ दिनमा मुलुकको विभिन्न…
बाढीपहिरोबाट ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता
काठमाडौं । यसवर्ष वर्षायाम शुरु भएपछि अहिलेसम्म बाढीपहिरोबाट ८८ जनाले जीवन गुमाएका छन् । मनसुन सक्रिय भएपछिको २९ दिनमा मुलुकको…
२०७७ असार २८ गतेको राशिफल
मेष– यात्रामा धन हराउन सक्नेछ । काममा क्षति वेहोर्नु पर्नेछ । साथीसँग रमाइलो मिल्नेछ । वृष– पुरानो लकाममा लाभ पाइनेछ…
मृगौला प्रत्यारोपणमा डाक्टरसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण प्रकरणमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित ४ जना पक्राउ परेका छन् । मृगौला…
थप ८२ जनामा कोरोना, संक्रमित संख्या १६,८०१ पुग्यो
मुरलीको घर पहिराेले बगायो